Indawo yokuhlala ngoTyalo mali lwase-UK kunye neGolden Visa
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho e-UK ngoku:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK
● Ubummi ngotyalomali oluvela e-UK
● IVisa yegolide e-UK
● Ipasipoti yesibini evela e-UK
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK ngokutyala imali nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali e-UK Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali e-UK kunye nabarhwebi beepropathi zokuhlala kwiarhente e-UK basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo-mali e-UK zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala imali e-UK, ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali e-UK, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali e-UK, ukuhlala okwesibini ngotyalo-mali e-UK, ukuhlala kabini ngotyalo-mali e-UK, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali e-UK. , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo-mali e-UK, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali e-UK, Ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo-mali e-UK, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali e-UK, Ubummi ngotyalo-mali e-UK, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali e-UK, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali e-UK, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali e-UK, ubumi bobabini ngotyalo-mali e-UK, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala imali e-UK, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali e-UK, iinkqubo zoBumi bezoqoqosho e-UK, Ubummi ngenkqubo yotyalo-mali e-UK, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali e-UK, okwesibini ipaspoti e-UK, iipasipoti zesibini e-UK, inkqubo yesibini yokundwendwela e-UK, ipasipoti yesibini yesibini e-UK, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini i e-UK, ipaspoti yesibini yozakuzo e-UK, ipasipoti yesibini kutyalo-mali e-UK, ipasipoti yesibini yokuba ngummi e-UK, iskim sepasipoti yesibini e-UK, izikimu zepasipoti zesibini e-UK, i-visa yegolide e-UK, ii-visa zegolide e-UK, iinkqubo ze-visa zegolide e-UK, Inkqubo yegosa yegolide e-UK, i-visa yesibini yegolide e-UK, inkqubo yesibini yegosa yegolide e-UK, i-visa yegolide e-UK, ubumi kunye ne-visa yegolide e-UK, ukuhlala kunye ne-visa yegolide e-UK, ubumi be-visa base-UK, i-visa ye-visa e-UK , Izikim zevisa zegolide e-UK.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali e-UK ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci e-UK lokuhlala kwakhona ngotyalomali: GBP 50,000
Intshayelelo e-UK kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo-mali
Funda ngakumbi nge-UK
I-United Kingdom, equka iGreat Britain (iNgilane, iWales, neScotland) kunye ne-Northern Ireland, iphindwe kabini ubukhulu beNew York State. I-Bhritane, kwinxalenye ekumzantsi-mpuma weBritish Isles, yahlukaniswa neScotland emantla ngamatye eCheviot Hills; Ukusuka kubo intambo yePennine yeentaba inyuka isiya emazantsi iye kufika eNgilane, ifike kweyona ndawo iphakamileyo kwiLake District kumantla ntshona. Ngasentshona ngasemaphethelweni eWales — indawo eyaziwa ngokuba ngamathambeka neentlambo — ziiNtaba zeCambrian, ngelixa iCotswolds, indawo ethambekileyo eGloucestershire, ifikelela kulomngxunya ojikelezayo.
Imijelo yamanzi ebalulekileyo yokungena kuLwandle lwaseMantla nguMlambo iThames, uHumber, iTee kunye neTyne. Ngasentshona yiSevern kunye neWye, engenanto kwiBristol Channel kwaye iyahamba, iyafana neMersey kunye neRibble.
Ukuqonda amazwe ayo ahlukileyo, iindawo, abantu, kunye neendlela zokuphila kunokuthatha ubomi bonke. Nangona kunjalo, kukho izinto ezibalulekileyo ekufuneka zenziwe ngumntu ngamnye wangaphambili ngaphambi kokuba bathathe inyathelo.
Umbuso omnye, izizwe ezininzi
I-UK ibandakanya amazwe amane: iNgilani, iScotland, iWales, kunye ne-Northern Ireland. Ngamnye unenkcubeko yakhe enobuntu kunye nobuntu, obuqinisekiswa ngokumasikizi ngabantu basekuhlaleni.
Izithili ezahlukeneyo kunye noluntu lwasezidolophini kwisizwe ngasinye ngokufanayo zinobuntu bazo. Kuhlala kusithiwa abantu abavela eMantla eNgilane bacacile kwaye baqinisekile kunabo bavela eMzantsi, umzekelo. Nangona ulunge kangakanani ukufumanisa ukuba ezi zinto zingaziwayo ziya kuxhomekeka ikakhulu kubantu odibana nabo!
I-UK luhlanga olunenkcubeko oluninzi kwaye ngokuchaseneyo konke ukukholelwa kunye noluntu. Ukwahlulahlula kuxhomekeke kubuhlanga, isini, ulwalathiso ngokwesondo, ubudala, okanye ukukhubazeka akukho semthethweni. Ukuhanjiswa okuninzi kutsalelwa e-UK ngenxa yolu hlobo, becinga ukuba yindawo entle nenokuhlala.
Ngapha koko yahlukile kwisalamane sayo, kukho izinto ezithile ezisisiseko ekwabelwana ngazo uninzi lweBrits. Bayakhuthazwa ngokubamba kwabo, abathambekeli kwimiboniso ebalaseleyo yemvakalelo, kwaye kufanelekile ukhuseleko lwabo. Oku kungakhokelela ekuphumeni okumbalwa okuvakalayo ukuba "bayabanda" - okanye bayanyelisa - kwasekuqaleni. Ngelixa oku kungathintela ingxoxo kwizithuthi ezivulekileyo, uya kuthi kungekudala ufumanise ukuba iBrits inokuba shushu kwaye inomdla njengaye nawuphi na umntu.
Ewe, uburharha buyimfuneko emangazayo eBrits - ngakumbi amandla okuziqhayisa! Yiba nokuba kunjalo, sukuphambanisa ukungazithembi kwabo ngokungabikho koloyiko. Yinyani yokuba bayaluthathela ingqalelo ulwazelelelo kunye nemikhwa emihle, kwaye ithathwa ngokuba "kukuziphatha okungalunganga" ukuvuya.
Amaninzi ex-pats afumanisa ukuba kufuneka abone ukuba angalifumana njani ibali lokwenyani xa ethetha neBrits. Abanye bangathanda ukunika impendulo engacacanga kunengozi ebangela ukwaphuka-ke kuya kufuneka uphulaphule ngononophelo ukuze ufumane uluvo lwabo. Ngokunokwenzeka eso sisizathu sokuba iBrits ithande ibanter engaqhelekanga kakhulu-ngakumbi kwimeko apho ichaphazela imozulu!
Ngelixa ifumene ukungaziwa ngokuba mfiliba, blustery, kwaye kubandayo, i-UK ngokwenyani inamaxesha onyaka aqinisekileyo kunye nokuhlukahluka kwemozulu. Ubusika obude, obuqhelekileyo obupholileyo bunokuba luvavanyo lokuphuma kwiindawo ezishushu ezishushu kodwa iinyanga zentwasahlobo kunye naphakathi enyakeni zibonelela ngento efanelekileyo yeentsuku eziqaqambileyo. Ewe, nokuba ubude behlobo, imvula ihlala ilithuba.
I-UK luqoqosho lwesihlanu ngobukhulu behlabathi xa kuqikelelwa yi-GDP. Amaninzi ex-pats atsalelwa kwisizwe ngemivuzo ephezulu ngokubanzi kunye nendlela efanelekileyo yokuphila. Nangona kunjalo, ezi ndawo kugxilwe kuzo azisasazeki ngokulinganayo ngaphezulu kweendawo zayo kunye neenkqubo.
Amalinge olawulo-, umzekelo, ukubhenka kunye nokukhuselwa- kuchume ngaphezulu kweminyaka eqhubekayo, ngelixa amashishini aqhelekileyo-, umzekelo, ukuvelisa-anciphile. Njengoko imele ngaphezulu kwe-1,000,000 yezikhundla kuqoqosho lwase-Bhritane, ukuhlanganiswa kolawulo lwemali eLondon nakwimpuma-mpuma kuthetha ukuba le mimandla iqhume. Iindawo ezahlukileyo azivanga ngokubanzi ngezibonelelo ezifanayo zemali.
I-expats mhlawumbi iza kufumana umvuzo ophezulu kwiindawo ezinempumelelo; Nangona kunjalo, kuyakufuneka ukuba balwe nendleko ezinkulu zokuphila. Ngeendawo zase-UK ezithembakeleyo zisebenza zilungelelanisa uqoqosho lwazo-kunye nokuzimisela kweendawo ezisezidolophini ezinobuzaza kwihlabathi liphela kubonwe kulo lonke ilizwe-i-gutsy ex-pats inokuhlawulwa ngendlela ephezulu yobomi ngaphandle kwekomkhulu.
AmaBritane ubukhulu becala asebenza ixesha elide. Kuqhelekile ukubona abahlobo bethatha umsebenzi wabo ekhaya kunye nabo ebusuku nasekupheleni kweveki. Ngokuvela kwendlela entsha yembalelwano, i-ex-pats ezimbalwa ezinokuthi zifumanise ukuba zixhomekeke ekubeni zinxibelelane ngokungaguquguqukiyo nomphathi wazo. Ngokuchwayitileyo, ingxoxo eqhubekayo malunga nendlela oku okuyiphembelela ngayo inzuzo iqhube imibutho emininzi ukuba izame ukwenza ibhalansi yomsebenzi wobomi obuphezulu kubasebenzi babo.
Ngelixa inkcubeko yexesha elandisiweyo kunye nomsebenzi onzima sisisiseko e-UK, abasebenzi nabo bayakhuselwa ekwahlukaneni nasekuxolelweni ngokungekho ngqiqweni ngumda wamalungelo asemthethweni. Imibutho emininzi izama ukwenza ukuba abameli bayo bahlengahlengise amashishini kunye nosapho-bencediswa likhefu labazali elilawulwa ngurhulumente, intlawulo yokubeleka / yokubeleka, kunye noncedo ngeendleko zokukhathalela abantwana. I-UK inebutho elahlukileyo, elinenkcubeko eyahlukeneyo.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali lwase-UK
Ubuncinci botyalomali Indawo yokuhlala ngokutyala imali e-UK
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye UK
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK
I-Tier-1 Innovator / i-visa yoosomashishini kunye ne-Tier-1 visa yabatyali
Iqhubekeka nexesha lokuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK
Kufuneka uphile iinyanga ezili-9 ngonyaka e-UK TR nakwi-PR emva kweminyaka emi-5 (ILR)
Emva kweminyaka emi-6 iyonke inqanaba le-ILR
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi base-UK
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala imali e-UK
I-50,000 Tier-1 Innovator / i-Visa yoShishino ngokuqalisa utyalomali kumashishini ase-UK
I-2,000,000 yeTier-1 visa yabatyali mali kutyalo-mali kwiibhondi zikaRhulumente wase-UK, okanye isabelo mali kwinkampani zase-UK. Ukuthengwa kwezindlu nomhlaba akuvumelekanga
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala e-UK
I-United Kingdom lelinye lawona mazwe anamandla emhlabeni. Kuqwalaselwa njengoluntu olunenkcubeko, 1 yeenkonzo zononophelo zempilo ezisimahla, amathuba emfundo aphakamileyo kunye necandelo lezemali elikhethekileyo. Inkqubo yokuhlala yegolide yase-UK inenkqubo ekhawulezayo phakathi kweenkqubo ezinokuthelekiswa namazwe e-G8: ngesiqhelo, imvume ikhutshwa ngexesha leenyanga ezi-6-8. Inkqubo ikwaqwalaselwa ngokwemiqathango ethe ngqo, eqinisekisa iziphumo ezilindelekileyo. Ngaphaya koko, imeko yokuhlala engalawulekiyo ibonelela ngendawo enomtsalane kwirhafu yabantu abaxabisekileyo. Abafakizicelo kunye namalungu osapho kufuneka bahlale kweli lizwe hayi ngaphantsi kwe-50% yexesha emva kokuba imvume yabo ikhutshiwe.
Ukufudukela kosapho e-UK
Isicelo sokuhlala singabandakanya iqabane lakho, abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala kunye nabantwana abaxhomekeke kwimali ngaphezulu kweminyaka eli-18. Emva kokufumana imvume yokuhlala, bonke abafaki zicelo kufuneka bahlale e-UK kwaye imvume yokuhlala yabantwana iya kunikwa kuphela ukuba ngaba imvume yabazali bobabini.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali e-UK
Ukulungela inkqubo yegolide yokuhlala, abafaki-zicelo kufuneka bangenise ubungqina bokuba banemali eyoneleyo yokuzixhasa kunye nabaxhomekekileyo ngaphandle kokuthatha ingqesho.
Kuya kufuneka wenze i-United Kingdom likhaya lakho eliphambili. Oko kuthetha ukuba awukwazi ukuchitha ngaphezulu kweentsuku ezili-180 ngonyaka ngaphandle kwe-UK. Awunyanzelekanga ukuba ungqine amava olawulo loshishino okanye izakhono zesiNgesi okwangoku.
Uza kuqala ufumane i-Tier 1 visa yeenyanga ezingama-40, kwaye kufuneka wenze utyalomali olukhethiweyo kwiinyanga ezintathu zokungena. Imvume yokuhlala, emva kokuphela kwexesha lokuqala leenyanga ezingama-40, iya kwandiswa iminyaka emibini ukuba uqhubekile nokwanelisa izicelo ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Emva kweminyaka emihlanu uyakuba ngumhlali osisigxina. Kule meko kufuneka ubonakalise ulwazi lwesiNgesi, isiWelsh okanye iScotland ulwimi lwesiGaelic kunye nolwazi olusisiseko ngobomi kunye nenkcubeko yase-United Kingdom. Uya kuba nethuba lokufaka isicelo sokuba ngummi wase-United Kingdom.
Isidingo semali se-UK
Ukuze ufumane indawo yokuhlala okwethutyana iminyaka emihlanu kunye nokuhlala isigxina, abafaki-zicelo kufuneka batyale i-GBP 2 yezigidi. Iipesenti ezingama-75 zotyalo-mali kufuneka zibe ngohlobo lweebhondi zikarhulumente okanye utyalo-mali lweshishini kwaye iipesenti ezingama-25 kufuneka zichithwe kuthengwa iiasethi okanye ekwenzeni idipozithi ebhankini.
Ukuba ufuna ukufumana ubumi ngokusisigxina kwangoko, kufuneka unyuse inani lotyalo mali. Tyala i-GBP yezigidi ezi-5, uyakuba ngumhlali osisigxina kwiminyaka emithathu, kwaye nge-GBP yezigidi ezili-10, ixesha lokuhlala isigxina yiminyaka emibini kuphela. Oku kusebenza kuphela kumfaki sicelo omkhulu hayi kubaxhomekeke kuye. Abokugqibela baya kufumana indawo yokuhlala esisigxina emva kweminyaka emihlanu phantsi kwazo zontathu iindlela zokhetho lotyalo-mali.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali e-UK
Iqela lethu Kuhlala Ngabameli botyalo mali base UK kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha ye-UK ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo e-UK ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela e-UK, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela e-UK kunye namanye amathuba otyalo-mali wokufudukela kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu azikhawulelwanga ekuhlaleni ngenxa yotyalo-mali oluvela e-UK okanye kwi-Golden Visa yase-UK okanye kubumi ngotyalo-mali oluvela e-UK okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu e-UK, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani I-UK okanye i-offshore, izibonelelo zabasebenzi e-UK kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi e-UK nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi base-UK:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali ye-UK, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena I-UK, abatyali mali abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo e-UK, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali e-UK, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali e-UK kunye nefemi yokubonelela ngokufuduka e-UK.
Indawo yokuhlala ngokutyala imali isuka e-UK iye kumazwe angama-37.
I-visa yegolide e-UK kumazwe angama-37.
Ubumi ngotyalo-mali olusuka e-UK luye kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka e-UK ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini ngokusekwe e-UK ukuya kumazwe e-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela e-UK.
Iinkqubo zeVisa zegolide e-UK kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka e-UK ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka e-UK ukuya kumazwe e-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka e-UK ukuya kumazwe e-106.
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali e-UK ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu e-UK ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali e-UK, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo lokuba ngabahlali ngokuTyala imali e-UK. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa abathengisa izindlu nomhlaba e-UK abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo e-UK, bezisa eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabanini bearhente eUK kunye notyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eUK.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona e-UK ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona liGqwetha loTyalo-mali e-UK kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu olunenkcukacha malunga nokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutyala imali e-UK. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali e-UK kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka e-UK okanye e-UK, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokukhuthala, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali lwase-UK kubaxhasi lokufumana imvume yokuhlala e-UK kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo e-UK, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili ngokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali e-UK kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo-mali e-UK. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBuhlali ngokuTyala imali e-UK kunye neeVisa zegolide ziya kunceda ngokugcwalisa iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwakho afake isicelo sokutyala imali e-UK, siya kuyigcwalisa ngabasemagunyeni base-UK.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala imali e-UK samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali e-UK kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini ase-UK:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali zase-UK azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka okanye eziya e-UK.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali zase-UK azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha e-UK okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya e-UK.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eUK awanikelwanga ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo mthetho e-UK.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali ye-UK ayenzelwa abantu abajongana nemathiriyeli yemfuzo e-UK.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali zase-UK ayisiyo yamashishini ajongene nezixhobo eziyingozi okanye ezinobungozi zebhayoloji okanye izixhobo zenyukliya e-UK.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso ye-UK ayifumaneki kubantu base-UK abathengisa ngorhwebo, ukugcinwa e-UK, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oluntu.
Kuhlala ngotyalo-mali ye-UK ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo ye-UK ayizizo iinkolo zonqulo kunye noncedo lwabo e-UK.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi UK ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala e-UK.
Indawo yethu yokuhlala amagqwetha e-UK abaxhasi ukuthengisa ngokuthengisa iziyobisi e-UK.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxumi base-UK nakwi-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni e-UK ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali e-UK.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo-mali e-UK yotyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nocwangciso lwezindlu e-UK.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zase-UK, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali zase-UK zibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo e-UK.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona kubabini kwi-UK exhasa abathengi kunye neentsapho zabo e-UK.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali e-UK kunye nabameli bezomthetho e-UK ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha yase-UK kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho e-UK nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu e-UK
Sinamava aphesheya kwezokuhlala ngokutyala kubandakanya i-UK, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala imali e-UK kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali kwi-UK
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi be-UK, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali yase-UK kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa ye-UK
Inkqubo yemvume yokusebenza e-UK
Ukuhlala okwethutyana e-UK
Indawo yokuhlala e-UK
Izindlu zoonozakuzaku kunye neeNdlu zoonoRhulumente base-UK
Indawo yokuhlala ngoTyalo mali e-UK kunye nezinye iiNkonzo
Sibhale uluhlu lweenkonzo ezimbalwa esizibonelelayo e-UK ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukuhambisa usapho lwakho uye e-UK ngokutyala, thina njengeqabane lakho lase-UK, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo e-UK ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo-mali e-UK, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo ze-HR nase-UK, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi base-UK abasenza ivenkile yokumisa enye i-UK kunye ne-106 yamazwe.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nakwihlabathi liphela kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini e-UK ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yethu yomthengi engaphaya kokuhlala ngokutyala imali e-UK ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokuzimanya e-UK nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani e-UK okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani e-UK zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki e-UK
Nawuphi na umtyalomali ofudukela e-UK uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho e-UK kunye neakhawunti yebhanki yenkampani e-UK, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula e-UK
Ngaba ufuna ukubonisana e-UK, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali e-UK Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech e-UK okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali UK ukuba ucwangcisa qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho e-UK ukuqala kwangoko e-UK.
Iinkonzo ze-HR e-UK
yethu Inkampani yabasebenzi e-UK inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba zengqesho e-UK free.
Iinombolo zeFowuni ezinyanisekileyo zase-UK
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zase-UK kunye amanani abonakalayo e-UK Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali e-UK
Accounting, ngenxa yenkuthalo e-UK kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo e-UK
Ukuseta ishishini e-UK
Emva kokuhlala ngokutyala imali e-UK, ukuseta ishishini kwi UK.
Sinikezela ngezisombululo ze-IT ezichazwe apha e-UK
Uyilo lwewebhu e-UK
Uphuhliso lwezoqoqosho kwi-UK
Uphuhliso lwewebhu e-UK
Uphuhliso lweBlockchain e-UK
Uphuhliso losetyenziso eUK
Uphuhliso lweSoftware e-UK
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali e-UK
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni ngezisombululo zotyalo-mali e-UK kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, e-UK, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho yase-UK inee-arhente zokufudukela e-UK, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini okwenza iinkonzo e-UK kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu base-UK kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali e-UK kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala e-UK, kwimvume yakho yokuhlala e-UK yamkelwe.
Amandla egqwetha lase-UK ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo-mali e-UK. Ukuba use-UK okanye uceba ukutyelela i-UK, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani e-UK ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla wase-UK. Kuxhomekeka kwilizwe lokuhlala kwakho, kufanelekile ukuba kukhutshwe okanye kubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli wase-UK.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo - Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali e-UK
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali e-UK?
Ukuhlala kwakhona ngotyalomali e-UK, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala e-UK ngokutyala imali kuqoqosho lwase-UK ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali e-UK, ukuhlala kwenkqubo yotyalo-mali yase-UK. ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo-mali e-UK, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali e-UK, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo-mali e-UK kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo-mali e-UK, abasebenza ngokuhlala kakuhle ngabameli botyalo-mali e-UK, kunye neefem e-UK.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali e-UK | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo-mali e-UK | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali e-UK | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali e-UK | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo-mali e-UK
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali e-UK?
Ubummi ngotyalo-mali e-UK, bunokuchazwa njengokufumana ubumi base-UK ngokutyala imali kuqoqosho lwase-UK ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali e-UK, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yase-UK exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali e-UK, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali e-UK, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali e-UK kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali base-UK, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo-mali e-UK, kunye neefemu zokubonisana nabantu abavela kwamanye amazwe e-UK.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo e-UK | Abaceli abafudukayo abafikelelekayo e-UK | Utyalomali olufikelelekayo lwamagqwetha ase UK | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha e-UK | Abatyali mali abafikelelekayo kwi-UK | Iifemu zomthetho wofuduko olufikelelekayo e-UK
Iyintoni inkcazo yepaspoti yesibini e-UK?
Ipasipoti yesibini e-UK, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni base-UK ngokutyala imali kuqoqosho lwase-UK ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eya e-UK, inkqubo yesibini yencwadana yokundwendwela yase-UK exhaswa yi Iinkonzo zokundwendwela zesibini e-UK, ngamagqwetha esibini eepasipoti e-UK, awona magqwetha esibini eepasipoti e-UK kunye nabaphenyi besibini abaphumeleleyo e-UK, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini e-UK, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela e-UK.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini e-UK | Iiarhente zokundwendwela zesibini e-UK | Amagqwetha esibini epasipoti e-UK | Igqwetha lesibini lokundwendwela e-UK | Abacebisi bokundwendwela besibini e-UK
Iyintoni inkcazo yevisa yegolide e-UK?
I-visa yegolide e-UK, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala e-UK ngotyalo-mali kuqoqosho lwase-UK ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo se-visa yegolide e-UK, inkqubo yegosa yegolide ye-UK exhaswa yi Iinkonzo zeVisa zegolide zase-UK, ngamagqwetha ethu abalaseleyo e-visa e-UK, amagqwetha egosa aphezulu e-visa e-UK kunye nabacebisi abaphambili be-visa e-UK, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide e-UK, kunye neefem zokubonelela ngokufuduka e-UK.
Iinkonzo zevisa ezimnandi ze-UK | Iiarhente zevisa ezimnandi e-UK | Amagqwetha egolide egolide e-UK | Amagqwetha egosa egolide e-UK | Abacebisi ngevisa zegolide eUK
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala e-UK?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala e-UK yi-GBP 50,000.
Ngaba uyabonelela ngenkxaso yezomthetho yase-UK yokuHlala kwakhona ngokutyala imali?
Ewe, igqwetha lethu e-UK kunye neearhente zase-UK zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali e-UK kubiza kakhulu?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala imali e-UK kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali zotyalo-mali zase-UK zezabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngokuTyala e-UK, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo-mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala imali e-UK okanye kwi-visa yomtyali mali e-UK?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala imali e-UK usuka e-Asiya, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali e-UK usuka e-Afrika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK usuka eYurophu, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK usuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali e-UK usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali e-UK usuka e-Bangladesh, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK usuka e-Indonesia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-UK usuka eSri Lanka, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali e-UK usuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali e-UK usuka e-India nase-Residency Ngotyalo-mali lwase-UK olusuka e-UAE
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali ye-UK
Cela ukubonisana simahla malunga nokuHlala kwakho ngokuTyala imali e-UK
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali e-UK
IPalamente yase-United Kingdom KwiNdlu ye eNkosi
Hlanganisa kwi ISebe loFuduko lwase-UK , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko e-UK